Porsche AG ကလယာဉ်အရောင်းနှုန်းပထမဦးဆုံး6133 တထောင် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလောကဥရောပ49 ဂျာမဏီလယာဉ်အရောင်းနှုန်း Porsche AG ကပထမဦးဆုံး6133 တထောင်
02 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 49 ဂျာမဏီ, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ 0
Porsche AG ကပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးလတစ်လအတွက်တထောင်မော်တော်ယာဉ်အရောင်း
Porsche AG က, 2019 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းအားဝင်ငွေ၏ပထမခြောက်လယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ9ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
Porsche AG က, 2019 ပထမခြောက်လအဘို့ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်တွေကိုကြေညာခဲ့သည်။ Porsche ရဲ့ရောင်းအားင်ငွေသည်ယခင်နှစ်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်9ဘီလီယံယူရို 13,4 ဖို့ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ အထူးပစ္စည်းများကိုမတိုင်မီစစ်ဆင်ရေး၏ရလဒ်များကို output ကို၏3ဘီလီယံယူရို 2,2 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Delivery ကုမ္ပဏီဇွန်လကုန်ခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်2133 တထောင်မော်တော်ယာဉ်များကိုအပ်ထားပါတယ်, 484 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အလုပ်အကိုင်အရေအတွက်, ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်း 20195ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက် 33 839 တထောင်န်ထမ်းရောက်ရှိခဲ့သည်။
Porsche AG ကဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှာ Oliver Blume "ဟုအောင်မြင်သော 2019 ၏အောင်မြင်မှုကိုနောက်ကွယ်မှယခုနှစ်ပထမခြောက်လအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို၏ပထမဦးဆုံးခြောက်လယခုနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်လှုပ်ရှားမှုများ၏စည်းကမ်းချက်များoluşturdu.bတစ်ဦးအစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်အသစ် 911, 911 Cabriolet, Cayenne Coupe, 911 Speedster, 935, 718 Spyder ကျနော်တို့ GT4 မုသာတူသောဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အိုင်တီ Mesche Lutz တာဝန်ရှိသည် Porsche ၏ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဘဏ္ဍာရေး / အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တနှစ်တွင်တစ်စိန်ခေါ်မှုပထမသုံးလပတ်ပြီးနောက်ယခုကြှနျုပျတို့အပြည့်အဝလမ်းကြောင်းသို့ ဝင်. နေကြသည် "ဟုပြောသည်။ ယခုနှစ်တိုးတက်မှု၏ပထမဦးဆုံးဝက်ပိုမိုမြင့်မားမော်တော်ယာဉ်အရောင်းယူနစ်ကနေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ e-mobility တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆနျ့ကငျြဘငွေကြေးကိုသက်ရောက်မှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Porsche AG ကပထမနှစ်ဝက် 2019 133 484 တထောင်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုအပ်လိုက်ပါတယ်။ ဤသည်ယခင်နှစ်ကာလတူရာခိုင်နှုန်းကို xnumx'lik တစ်ခုတိုးဖို့ညီမျှသည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဒီကာလအတွင်းပေးပို့အတွက် Cayenne ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက် xnumx'lik245 တထောင်ကိုအပိုင်းပိုင်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်ရောင်းအားနှင့်အတူပွဲစဉ် 41 725 တထောင်ဖြစ်ဆက်လက်သိရသည်။
Porsche ဇွန်လကုန်နေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင် 28 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ အာရှပစိဖိတ်, အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းပေးပို့, 20 ရာခိုင်နှုန်းကိုယခင်နှစ်ကာလတူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် 57 397 တထောင်ယာဉ်များရောက်ရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်, Porsche ခုနှစ်, 30 257 တထောင်ရရှိပထမနှစ်ဝက်တစ်နှစ်အတွက်၎င်း၏အနေအထားကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ပေးပို့အတွက်3ရာခိုင်နှုန်းကိုကြီးထွားမှတ်ပုံတင်။
ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 2019 hedefliyor.b တိုး Cayenne Coupe အတွက် Porsche ရောင်းအားတိုး, 718 718 Spyder နှင့်ကေမန်ထိုကဲ့သို့သော GT4 အဖြစ်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေကနေမျှော်လင့်ထားကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းရောင်းအားဝင်ငွေအတွက်သေးငယ်တဲ့တိုးခန့်မှန်းထားသည်။ Mesche "လျှပ်စစ်ဓာတ်အား, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတည်နေရာ၏ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက်မဟုတ်ဘဲမြင့်မားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြားမှကျနော်တို့ Porsche ရဲ့မြင့်မားတဲ့ဝင်ငွေပစ်မှတ်တွေ့ဆုံရန်ဆက်လက်ရည်ရွယ်ထား" ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဝန်ကြီး Turhan: 'မီးရထားဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 133 ကျနော်တို့ Make' ' 25 / 07 / 2019 ဇူလိုင်လအတွက်သာမန်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာသူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာဝန်ကြီးချုပ် Turhan, စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစ္စတန်ဘူလ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ISO) က, အများ၏အစည်းအဝေးတစ်ခု "ဟုအဆိုပါစီးပွားရေး၏အခြေခံဒြပ်စင်၏ဆက်သွယ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများ၏အရေးပါမှု" ဟုသူကခေါင်းစဉ်သိသိသာသာပင်ဖြစ်သည်အောင်ကပြောသည်။ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ၏အခြေခံအုတ်မြစ်စီးပွားရေးလွတ်လပ်ရေးအပေါ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့် Turhan န်ကြီးကတူရကီများအတွက်မရှိမဖြစ်နိယာမကြောင်းဖော်ပြထားဟုသူကဆိုသည်: "ကမ္ဘာခုနှစ်တွင်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်ကောက်ယူ, ဒီနိယာမ၏အရေးပါမှုကိုပိုပြီးအရေးပါသောအကိုဆိုလိုတာရန်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလွတ်လပ်ရေးတိုက်ရိုက်အရာအားလုံးထိခိုက်အဓိကမိုးကြိုးဓါတ်လုပ်စက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသလို့ပဲ။ အဆိုပါအချက်များမိုးကြိုးဓါတ်လုပ်စက်ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ...
Yavuz Sultan Selim တံတားဟာ 50 110 များအတွက်ဖြတ်သန်းတထောင်တထောင်ယာဉ်များစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် 26 / 09 / 2016 Yavuz Sultan Selim တံတားဖြတ်သန်းသည့် 50 110 ဘို့လူတထောင်တထောင်ယာဉ်များစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်း: CHP နှင့်အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် Yavuz Sultan Selim တံတား link ကိုလမ်းမှတျတမျး GES ၏အဆုံးရှေ့တော်၌ထိုကားထဲတွင်ကျိုးပဲ့၏ဆောက်လုပ်ရေးထိခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အလားတူအဆိုပါ Osmangazi များအတွက်မှန်သည်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, Sultan Selim Yildirim နှင့်တံတားပေါ်ဒီကဗျာမှတ်ချက်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နာမတော်ကိုဆန့်ကျင်အဖြစ် CHP သူအချို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားသူတို့တောင်မှသူတို့စံချိန်ဖဲ့အတွက်အကူးအပြောင်း Yavuz Sultan Selim တံတားကိုသုံးပါလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာ။ တထောင်ယာဉ်များ 50 မှ Start, သင့်ကွန်နက်ရှင်မြန်နှုန်းတံတားကျော်ဖြတ်သန်း 110 တထောင်ယာဉ်များအဆုံးသတ်လမ်းများစီစဉ်ထားနေ့စဉ်ဖြတ်သန်းရတယ်။ ...
mxnumx ကွန်ကရစ်သံလမ်း5အတွက်တထောင်တန်ချိန်ထားကြ၏သွန်းလောင်းခဲ့သည်Akçarayလိုင်း3တထောင် 08 / 03 / 2017 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်အများအပြားအဆောက်အဦးပစ္စည်းများ အသုံးပြု. Akçarayအဆိုပါလမ်းရထားစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေး၏နယ်ပယ်အတွင်း၌: Akçarayလိုင်း53 တထောင် mxnumx ကွန်ကရစ်သံလမ်း၏တထောင်တန်ချိန်ထားကြ၏သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်၌ပြစ်မှားမိအဆိုပါအလုပျပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ mxnumx သည်အထိအပြန်အလှန် 977 7,2 တထောင်ကီလိုမီတာရှည်လျားသောလမ်းရထားလိုင်းကိုစေရန်ကာလ၌ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှလာမယ့် Kocaeli-Sekapark အတွက်လမ်းရထားကားတစ်စီးနှစျယောကျရထားလမ်းစုရုံးတန်ချိန်ကျင်းပခဲ့သည်5တထောင်, ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းလေ၏။ သူတို့ကအထောင်အသောင်းကိုအပိုင်းပိုင်း3977 နှင့်အတူရထားလမ်းစွဲစေ trifon အသုံးပြုခဲ့သည်တထောင်ကိုအပိုင်းပိုင်း 36 မှ 854 ။ BIN 737 100 အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုတလျှောက်စီမံကိန်း mxnumx အောက်မှာကွန်ကရစ်တထောင်ကုဗမီတာ ...
တူရကီအတွက်မြေအောက်ရထားနှင့်ရထားလမ်းစနစ်အသုံးပြုသောခံရဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန 2023 နှစ်ပေါင်း5တထောင်ကိရိယာတန်ဆာပလာမှတက်များကိုထင်နေသည် 02 / 02 / 2012 တူရကီက Metro မြေအောက်ရထားကိရိယာ 324 14 တင်ဒါပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများ '' turnaround အတားအဆီး '' အဘို့အဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကျင်းပလိမ့်မည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ 10 ယူရိုသန်းစျေးကွက်တင်ဒါဖို့ပြင်ဆင်ထားဒေသခံထုတ်လုပ်သူများကတဆင့်ထိတ်လန့်လှိုင်းတံပိုးကိုစလှေတျသောပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှု '' တစ်ကြိမ် 30 မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိ '' အခြားပါတီများ '' ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအလှူငွေ '၌ပထမဦးဆုံးတူရကီထုတ်လုပ်သူများဖွင့်လှစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းက 51 အတွက်အသုတ်, 130 ရာခိုင်နှုန်းကိုလေလံ၏အစုံအတွက်လိုအပ်ချက်။ 324 40 ယခုအချိန်အထိယာဉ်များ၏နူးညံ့သောသတ်မှတ်ချက်များအတွက်အခွအေနေ '' တစ်ကြိမ်မှာပြီးစီးခဲ့ပြီ '' ကိုရှာဖွေခံရဖို့နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ တူရကီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့ဤလိုအပ်ချက်, နည်းလမ်း '' ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ကားထဲတွင် 1 130 အချိန် '' ။ ဒါပေမယ့်တူရကီအတွက်အချိန်က ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 12 ကွင်းဆင်း Lighting စနစ်များ၏ Derince ဆိပ်ကမ်းကလောင် Lighting နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသုံးပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောင်းခြင်းနယူးနည်းပညာသိမ်းဆည်းခြင်းအဘို့အ (တပ်ဆင်ခအပါအဝင်) စားသုံးမှု 21 / 11 / 2012 အလင်းနှင့်လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း 12 အပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေစားသုံးမှု 4734 အမှတ် (တပ်ဆင်ခအပါအဝင်) သစ်နည်းပညာသိမ်းဆည်းခြင်းစနစ်များကလောင် Lighting နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသုံးပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောင်းလဲနေတဲ့မှသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် 19 ၏ (TCDD) DERİNCEဆိပ်ကမ်း Operation Manager Derince ဆိပ်ကမ်း Yard Lighting ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည် ဒါဟာပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 164724 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: အရှေ့တောင်အာရှ mAh ။ liman လမ်း 41900 DERİNCE / Kocaeli ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2622397300 - 2622234278 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: fatmaguneroner@tcdd.gov.tr ​​...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Lighting အလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır (Goncalıဘူတာ Shunting Yard အလင်းပေးခြင်း) 22 / 08 / 2016 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏အကျင့်Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာမီး။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်တည်ဆောက်နေပိုင်ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေးGoncalı STATION ကိုခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 328381 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324640928 - 2324640928 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာကဒီမှာမြင်နိုင်ပါသည်: https: / တစ်) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏နူးညံ့မှ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် /ekap.kik.gov.tr/ekap/ ...
ပထမဦးဆုံးတဆယ်လ, ကြွေး 36 Usak အတွက်တထောင်ယာဉ်မောင်းလျှောက်ထား 17 / 11 / 2014 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yavuz Great Wall ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်အဝေးပြေးယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Action Plan ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအစည်းအဝေးခဲ့: တထောင် drivers တွေကိုပြစ်ဒဏ် 36 Usak ပထမဦးဆုံးတဆယ်လအတွင်းလျှောက်ထားခဲ့သည်။ စစ်ဆေးခြင်း၏ပထမဦးဆုံးတဆယ်လအတွင်း 2013 2014-နှစ်တွင်ကျင်းပဝန်အစည်းအဝေးခန်းမအစည်းအဝေး, မတော်တဆထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yavuz ၏ Great Wall မှာတွေ့ဆုံ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ဆွေးနွေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်ကြေငြာချက်ကိုဖန်ဆင်း 2013 180.808, 33 တထောင်ချွတ်ယွင်း drive ကို 536 8 539 တထောင် TL ဝါကျ 282 သန်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရသောယခုနှစ်ပထမတဆယ်လအတွင်းမော်တော်ယာဉ်များ check လုပ်ထားပါပြီ။ 2014 196.232 drive ကိုစစ်ဆေးနေစဉ်တစ်နှစ် 36 985 တထောင်ယာဉ်များ၏ပထမဦးဆုံးတဆယ်လအတွင်းချွတ်ယွင်းတွေ့ရှိခဲ့ ...
Denizli ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း 11 500 တစ်လလျှင်တထောင်ယာဉ်များ 18 / 09 / 2016 Denizli ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း 11 500 တစ်လလျှင်တထောင်ယာဉ်များ: DENiZLiLiLER ကြိုးတပ်ကိုချစ်၏။ ဒါဟာအစကိန်းဂဏန်းများထုတ်ဖေါ်ကျန်ရှိနေသေးသောလများ 11 ။ တစ်နည်း 18 က output Bağbaşıကုန်းပြင်မြင့်မှ cable ကိုကားတစ်စီးစီးကြောင့်တထောင်ကလူအတွက်ပြည်နယ်လူဦးရေရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တွင် 500 အောက်တိုဘာလတဝက်, ကတည်းက။ Denizli မြူနီစီပယ်တဲ့ဟန်ပြစီမံကိန်းများ Ropeway Denizli တစ်ဦးအဖြစ်ပြသရဲ့ကမွို့တှငျနထေိုငျလူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါဧည့်သည်၏အချို့အစီအစဉ်များအကြားBağbaşıကုန်းသွားကြဖို့ cable ကိုကားတစ်စီးအပါအဝင်ပြည်နယ်, ပြင်ပကနေဖြစ်ကြသည်။ Bağbaşıအတွက်မြို့ပြသစ်တောရပ်ကွက်အတွင်းသို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1400 ကုန်း output ကို cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်း၏ပထမဦးဆုံးဘူတာအဘို့ရာအရပ်ကိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အတူ6...
8 250 တစ်လလျှင်တထောင်ကလူ cable ကိုကားတစ်စီးသုံးစွဲဖို့ Tunektepe 05 / 10 / 2017 Antalya9months ago တထောင်ကလူပြောင်းရွှေ့ 250 မှ Tunektepe, ကေဘယ်လ်ကားဖွင့်လှစ်။ ယခုငါတို့သင်္ကေတဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာရှိသည်။ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လွန်ခဲ့တဲ့အဖွင့်9လကေဘယ်လ်ကြိုးကားဖြင့် လုပ်. , Tunektepe 250 တထောင်ကလူသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သူကို Tunektepe ထက်အေးဒီဂရီတစ်ခုအမြင့်နှင့်အတူ Antalya Sarısuကမ်းခြေ 4-5 618 မီတာအတွက်ကမ်းခြေမှာပင်လယ်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး9months ago အဖွင့်ကိုဖန်ဆင်းသောကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုအသုံးပြုနေသည်။ 36 200 တထောင်9250 မှတထောင်ကလူကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်နာရီလေယာဉ် Tunektepe မိနစ် cable ကိုကားတစ်စီးနှုန်းကလူစိတ်ဝင်စားမှုပြသသည်။ သူတို့ Tunektepe 40 ကြယ်ပွင့်ဖို့လုပ်ခံရဖို့7နှစ်စီမံကိန်းကို "ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုကမ်းလှမ်းဝန်ဆောင်မှုပြန်ခေါ်မြို့တော်ဝန် Menderes Turel ...
73 720 £အိမ်ခြံမြေပျက်စီးခြင်းပေးထားခဲ့သည်တစ်လအတွက် TCDD ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 31 / 08 / 2012 ကလေးတွေတစ်လဖန်ခွက် 380 ယူနစ်ကိုဖဲ့လေ့ကြောင်း Batman-Diyarbakir ပျံသန်းမှုကျောက်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ။ ပျက်စီးနေဖန် 73 720 တထောင် TL ၏ကုန်ကျစရိတ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူအမြောက်အများဒဏ်ရာရရှိနှင့်ရထားလမ်းကြိတ်၏ပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေတဲ့လွှဲမရှောင်သာအဖြစ်အပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောက်ခဲနှင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD), Batman ဘူတာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးSüleymanBağrıyanık, Batman-Diyarbakir ပျံသန်းသောတောင်ပိုင်း Express ကို Batman နှင့်ချိုးအပြည့်အဝ 380 ကြော်ငြာတွေပြတင်းပေါက်မှာသားသမီးများ၏ Diyarbakir output ကိုတစ်လ၏သမ္မတနိုင်ငံ, 73 တထောင် 720 TL ၏အကြောင်းရင်းစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုလစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ကျိုးဖန်၏ပြည်နယ်ကပြောပါတယ် ကြောင်း ...
Porsche AG က
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ31948 ဝန်ကြီးအဖွဲ့
ဝန်ကြီး Turhan: 'မီးရထားဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 133 ကျနော်တို့ Make' '
Yavuz Sultan Selim တံတားဟာ 50 110 များအတွက်ဖြတ်သန်းတထောင်တထောင်ယာဉ်များစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်
mxnumx ကွန်ကရစ်သံလမ်း5အတွက်တထောင်တန်ချိန်ထားကြ၏သွန်းလောင်းခဲ့သည်Akçarayလိုင်း3တထောင်
တူရကီအတွက်မြေအောက်ရထားနှင့်ရထားလမ်းစနစ်အသုံးပြုသောခံရဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန 2023 နှစ်ပေါင်း5တထောင်ကိရိယာတန်ဆာပလာမှတက်များကိုထင်နေသည်
ပထမဦးဆုံးတဆယ်လ, ကြွေး 36 Usak အတွက်တထောင်ယာဉ်မောင်းလျှောက်ထား
Denizli ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း 11 500 တစ်လလျှင်တထောင်ယာဉ်များ
8 250 တစ်လလျှင်တထောင်ကလူ cable ကိုကားတစ်စီးသုံးစွဲဖို့ Tunektepe
73 720 £အိမ်ခြံမြေပျက်စီးခြင်းပေးထားခဲ့သည်တစ်လအတွက် TCDD ထောင်ပေါင်းများစွာ၏